Connectify Hotspot & Dispatch Pro 7.2.1.2965 ( Laptop ကနေ Wifi ပြန်လွှင့်တဲ့ Software ) ~ (IT) ကိုထိုက်
Connectify Hotspot & Dispatch Pro 7.2.1.2965 ( Laptop ကနေ Wifi ပြန်လွှင့်တဲ့ Software )
4:13 AM pc wifi No comments
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Internet လိုင်းကို Laptop ကနေ Wifi ပြန်လွှင့်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. ကိုယ့်မှာ အင်တာနက်လိုင်းဖမ်းထားတယ်.. သူများကို ပြန်လည်မျှဝေစေချင်တယ်ဆိုရင် သာမန်အားဖြင့် Wifi Router တစ်လုံးတော့ လိုမှာဖြစ်ပါတယ်.. တကယ်လို့များ Laptop တစ်လုံးရှိရင်တော့ ဒီကောင်လေး Install လုပ်ပြီး ပြန်လွှင့်နိုင်ပါတယ်.. အသုံးပြုနည်းကလည်း လွယ်ပါတယ်.. Software မှာ Tutorial လေး ပါတယ်ခင်ဗျ.. သိထားဖို့ကတော့ Full Version ဖြစ်အောင် လုပ်နည်းပါ.. Setup ကို Install လုပ်ပြီးရင် ပိတ်လိုက်ပါ။ Crack ဖိုဒါထဲက ဖိုင် (၂)ခုလုံးကို Copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_Connectify ထဲမှာ Paste လုပ်ပါ.. Overwrite တောင်းရင် သဘောတူလိုက်ပါ.. ဒါဆို သုံးလို့ရပါပြီ..
Connectify Dispatch, you can even use two different Wi-Fi networks at the same time. Just connectasecondary USB Wi-Fi card (in addition to your laptop’s on-board Wi-Fi card) and Dispatch does the rest. At the click-of-a-button, you’ll be cruising the web at warp speed, using the combined throughput of both wireless networks. Even if you lose connectivity on one of those networks, Dispatch keeps you online, moving all of your traffic onto the working connection until both networks become available again.
Connectify Hotspot : 8.13 MB